Munamato wekuti andifonere uye kukumbira ruregerero. ? Mumaminitsi gumi
Munamato wekuda kundifonera ndokumbira ruregerero hachisi chiito cheudyire, sevanhu vazhinji vanozviona.
Icho, pane kudaro, chiitiko chekusunungurwa uye kupora kwemukati.
Dzimwe nguva tine vanhu muhupenyu hwedu vanogara vachitirwadzisa asi nekuda kwechimwe chikonzero uye, zvinoshamisa sezvazvingaite, hatingangoregi tichienda.
Nekudaro, munhu iyeye anoguma asiya matiri maronda mazhinji asati apora uye chero asinga apore isu tinosungwa nekusingaperi nekuti ichave iri nhanho yehupenyu hwedu iyo isati yakundwa.
Ichi chikonzero nei munamato uyu wakakosha, kudana uko kukanganwirwa ndiye protagonist ari murwere wekurapa nekukurumidza, uye pasina mubvunzo, tichava takagadzirira kutanga.
Kutanga hupenyu hutsva usati wapedza kuvhara magetsi kwakafanana nekuedza kuvaka chivakwa mumatongo eimwe iyo isina kutsungirira dutu nekuti nekufamba kwenguva, chivakwa chitsva chinozopedzisira chadonha futi. Iko hakuna munamato wepachokwadi unoitwa kubva mukufunga kweudyire.
1 Munamato wekuda kundifonera uye kukumbira kuregererwa unoshanda nguva dzose here?
1.1 Munamato wekundifonera mumaminitsi gumi.
1.2 Munamato wekuti unditsvake mumaminetsi gumi uye ndokumbira ruregerero
1.3 Munamato wekurasa tariro kuti undifonere
1.4 Namata kuna San Antonio kuti undifonere
2 Ndingataure here zvirevo zvina?
Munamato wekuda kundifonera uye kukumbira kuregererwa unoshanda nguva dzose here?
Minamato zvinotaurwa munyaya ino zvinoshanda nguva dzose. Iwe unongo fanirwa kunamatira nekutenda.
Ticharatidza akasiyana mana kuvasande vakasiyana. Iwe unogona kunamatira ese iwo pazuva rimwe chete, saka unowedzera simba rakawanda.
Kana iwe uchida kupera kutambudzika kwako unofanira kutanga unamatira izvozvi. Rubatsiro rwaMwari chete ndirwo runozoita kuti ndikufonere nekukurumidza.
Usatambisa imwe imwe nguva, inopa iwo mutsara pazasi!
Munamato wekundifonera mumaminitsi gumi.
Ishe, ini ndiri munhu akatendeka akazvipira, ari kukumbira rubatsiro, anokukumbira iwe kuti umupe foni iyo inogona kuve yakakosha, inogona kutsanangura zvinhu zvakawanda.
Ini ndinoda iyo kufona uye kuti yakanaka, kuti inounza nhau dzakanaka San expedito.
Iwe, musande wangu mutungamiriri, unotungamira munhu uya kuti aite sarudzo yeangu yakanaka.
Maminitsi gumi inogona kunge iri nguva inogoneka yekuti munhu iyeye auye kwatiri, asi yeuka kuti munamato unogona kuita zvese.
Kune zvimwe zvakatonyanya kushaiwa mhosva ipapo zvakatonyanya kudiwa matanho anofanira kushandiswa. Munamato wekufona mumaminitsi gumi unoshanda mune zviitiko zvekurumidziro yechokwadi, apo pasina chimwe chinhu chakawanikwa nevanhu kuita uye isu tinongofanira kuisa kutenda kwedu zvese mumunamato wekuti, zvinofanirwa kucherechedzwa, zvine simba.
Isu tinoziva kuti chokwadi chinogara chiri musimboti uye mumutsara uyu zvakafanana. Izvo zvinogona kuitwa chero nguva uye inongofanira kuratidza kutenda uye kudiwa kwatinako kana tichinamata.
Munamato wekunditsvaga mumaminetsi gumi ndokumbirawo undiregerere
Ah, anodiwa Musande weSyprian, nekunaka kwako uye huwandu hwako mumaropafadzo kune ivo vanoreverera iwe, ndinokumbira tsitsi, ndinokukumbira, o, Kudenga, bvumira izvo izvo kuti ini ndinonamata, kunditsvaga nemweya nemuviri, nekuti ini ndinoda wake rudo, rwekuda kwako uye kambani, o, San Cipriano, ine simba!
Dai chikumbiro chikasvika pakutsvuka kwako kutsvene, ini ndinoda kuti undipe chishamiso icho chaunotsvaga mandiri chishuwo chako uye rudo rwako rwakanyanya ...
O, Ishe, muve naye (taura zita rake) nditsvake kana amuka kubva pamubhedha wake uye panguva yekurara zvakare ... nekuti ndezvangu zvese!
Kuti anondikanganwa, kuti haagone kuita hupenyu hwake pasina hupenyu hwangu ... oo, muteveri wevakatendeka akatendeka uyo isu tinoda uye tinoreverera zvakare ... ita kuti iye munhu wandinoda, adzokere mukuita kwake uye anditsvage, anonyora nezvekuva neni padivi uye tsoka dzake dzinomutora ndokuenda naye kuchigaro, kwaanondiwana ...
Ah, chishamiso chemweya inovhara mukuchema, ndipe hupenyu, ndipe rugare uye ndipe zvese zvinondiudza, kuti kudzoka kwemudiwa wangu kuri padyo ...
Benemérito San Cipriano, kukomborera kwako kunouya kwandiri uye pamwe nacho, chishamiso chandinoshuvira, Baba vangu ...
Vatsvene baba! Ameni.
Munamato uyu une simba rakanyanya uye unofanirwa kuitirwa mukati zviitiko zve emergency Hatigone kuzvida uye kubvunza tisina kufunga nezveumwe munhu.
Kudzikama kwemoyo kunowanzoenderana nemumwe munhu, asi kana tikatarisa mukati medzemoyo yedu, zvinokwanisika kuti isu tigozowana kudzikama uye netariro yekutora imwe nguva uye tigokwanisa kusimudza munamato wakasarudzika kune mukuru wepamusoro.
Munamato wekuda kundifonera uchikumbira ruregerero izvo zvinogona kuitwa chero paine paine mukana wekusangana nemunhu akakosha iyeye.
Inogona kunge iri mwana, waimbobatirana naye, nhengo yemhuri kana imwe shamwari yatisati taona kwenguva yakareba uye vatove vari kuda kubatika uko kunongogona kuve chete kana watarisana nemunhu iyeye.
Munamato wekurasa tariro kuti undifonere
Baba vanonamatwa, ndinotya kurambwa… Ndapota ndinokumbira kuti mu (ZITA ROMUNHU) Ndidanei mundiudze manzwiro amunondiita, kuti nditaure manzwiro enyu ose.
Uye saka ndinogona kufara kuti kwete kudzoreredzwa. Ndipe simba rekutarisana nazvo pasina kurwadziwa, ndoziva kuti parutivi rwako ndinogona kukunda nekutsungirira zvese zvinouya. Usambondisiya Baba, padhuze newe ini ndakasimba
Patinogara tiine munhu mupfungwa, hatigone kudzivisa kuda kuziva nezvake nguva dzese sezvo kudiwa kwacho kwakasimba uye isu tinoda kuva mukubata asi hatigone kumira kusvika tasvika kumba, saka runhare runoratidzika kunge rwakanakisa sarudzo.
Izvi ndizvo chaizvo chinangwa ichi munamato wekusuwa. Izvo zvinodanwa kuti nekuti ndiyo yatove yekushandisa yekupedzisira yatiri kushandisa uye inoshanda uye ine simba zana muzana.
Minamato yega inopa simba rakanaka uye kana munamato uyu tinoisimudza nekutenda kukuru saka mhedzisiro yacho ichashamisa.
Mumuromo medu tine simba rakakura kwazvo, naro tinogona kuvaka kana kuparadza. Ndokusaka munamato uyu uchifanira kuitwa kubva pachokwadi uye nemutoro uzere pane zvatiri kuita.
Kugara tichifungidzira vamwe sevakuru kwatiri, sekureva kweshoko raMwari.
Namata kuna San Antonio kuti undifonere
San Antonio Nhasi ndinouya kwauri nekuti ndinoda rubatsiro rwako ...
Ndiri kuda (ZITA ROMUNHU) kuti andifonere ndakatsunga kumuudza manzwiro andinongoita asi chete kana iye / iye akafona ...
Ndinotya kuti ndinogona kurambwa asi ndinofanira kuziva.Iwe ndiwe wega unokwanisa kundibatsira nenyaya iyi San Antonio ini ndoda kusangana neiyi nguva nekuti ndinofanira kuziva kana ndadzoreredzwa Uye kana ndisiri ini ndinokwanisa kutarisa kumusoro kutsva ...
Uku kufona kunoreva zvakawanda kwandiri.Ndokusaka ini ndichida kuti zviitike nekukurumidza sezvazvinogona.
Kubvunza kune mafoni kuri kwechisikigo.
Panogona kuve nezvakawanda zvinangwa izvi zvekufona, semuenzaniso zvinogona kuve nekukanganwira kunodiwa kuti ufambire mberi, kungoziva kuti munhu iyeye aripi, kuratidza kuti aripo nguva dzese, muchidimbu, pazvinhu zvakawanda.
Chinhu chinoshamisa ndechekuti chikumbiro chinoramba chakafanana: ndifone.
Kana zvirizvo, chingo bvunza, zviri nyore. Pasina kunyara kana kutya asi na kujekesa uye kwechokwadi chinangwa Kugamuchira kutaurirana kwatinoshuvira.
Ndingataure here zvirevo zvina?
Unogona uye unofanirwa kunyengetera minamato yese.
Ivo vese vane masimba kwazvo uye kana vakanyonamatirwa vese nekuda kwemunhu mumwechete ivo vane simba rakawanda.
Gara uchinamata nekutenda munamato wekundifonera mumaminitsi gumi uye uve nekufara kukuru murudo!
Minamato kuna Saint Cyprian